Waayihii ay soo mareen wakiillada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya - BBC News Somali
Image caption Xarunta golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Qaramada Midoobay waxaa Soomaaliya si gaar ah ugu matalayay ergay khaas u ah xoghayaha guud ee mar walba xilka haya.
Xilka wakiilka gaar ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxaa isku soo baddalay diblomaasiyiin fara badan oo mid walba uu howsha meel soo gaarsiinayay.
Hase ahaatee waxaa intooda badan hareeyay qalalaasaha ka jiray Soomaaliya iyo dowladihii soo maray oo awoodooda aysan si buuxda cagga adag ugu taagayn.
Dhammaan wakiilladii Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ka soo shaqeeyay ayaa la kulmay dhaliisha qaar badan oo ka mid ah shacabka, kuwaasoo ku eedeynayay iney fara galin ku hayeen hannaanka dowladda.
Kuwani waa qaar ka mid ah wakiilladii ugu caansanaa ee saameynta ku yeeshay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya.
Image caption Maxamed Saxnuun
Xoghayihii guud ee hore ee Qaramada Midoobay Boutros Boutros-Ghali ayaa soo magacaabay wakiilkiisa gaarka ah ee Soomaaliya bishii Abriil ee sannadkii 1992-dii, waxaana xilkaas loo soo xulay Maxamed Saxnuun.
Diblomaasigan oo u dhashay dalka Aljeeriya ayaa la wareegay howlaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, xilli uu waddanka ku jiray xaalado adag oo ay sababeen dagaallo sokeeye.
Saxnuun ayaa u muuqday inuu u caal waayay xakameynta xaaladda Soomaaliya, wuxuuna ka cabasho ka muujiyay in aan si daacad ah loo wajihin arrimaha ka jira waddanka.
Waxaa uu sidoo kale ku guul darreystay inuu xal ka dhex abuuro hoggaamiye kooxeedyadii isku hayay siyaasadda Soomaaliya ee ay ka mid ahaayeen Maxamed Faarax Caydiid iyo Cali Mahdi Maxamed, inkastoo uu dadaal adag u galay inuu nabad ka abuuro Soomaaliya.
29-kii bishii Oktoobar ee isla sannadkii 1992-kii ayuu saxnuun xilka iska casilay, wuxuuna sheegay in tallaabadaas lagu saaray cadaadis.
Howshii uu Soomaaliya ka soo qabtay ayuu ku tilmaamay khibraddiisii ugu xumeyd ee soo martay intii uu ka howl galayay Qaramada Midoobay.
Image caption Ismat Kittani
Ismat Kitani oo u dhashay dalka Ciraaq ayaa baddalay Saxnuuni, si uu u sii amba qaado howlaha Qaramada Midoobay ee waddanka ay dagaallada ragaadiyeen ee Soomaaliya.
Durba waxaa soo baxay warar sheegayay in Mr Kitani uusan ku qanacsaneyn xilkaas loo dhiibay.
Ka dib markii ay hogaamiyeyaashii siyaasadda ee Soomaaliya ku dhaliileen inuu kibir badan yahay isla markaana uu xaaladda uga sii daray, waxaa u suurta gali weysay in uu howshiisa ka sii wado Soomaaliya.
Image caption François Louncény Fall
Mr Fall ayaa isagana ka mid ahaa wakiilladii Qaramada Midoobay ee soo maray Soomaaliya, intii ay ka jireen dowladihii ku meel gaarka ahaa ee la tacaalayay xaaladaha amni darro.
Xoghayihii guud ee hore ee Qaramada Midoobay Kofi Annan ayaa bishii May ee sannadkii 2005-tii u soo magacaabay François Louncény Fall inuu noqdo wakiilkiisa gaar ah ee Soomaaliya.
Fall oo u dhashay dalka Guinea ayaa horay u soo noqday ra'iisul wasaaraha dalkaas, ka hor inta uusan ka shaqo billaabin Qaramada Midoobay.
Waxa uu saldhigiisu ahaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Laga billaabo markii la soo magacaabay ilaa bartamihii sannadkii 2005-tii, Mr Fall waxay howshiisa ugu weyn ahayd inuu ku qanciyo hoggaamiye kooxeedyadii Soomaaliya sidii ay hubka u dhigi lahaayeen isla markaana miiska wada hadalka isugu imaan lahaayeen, si dib loogu yagleelo dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo burbursaneyd tan iyo 1991-kii.
Image caption Axmed Walad Cabdalla
Bishii September ee sannadkii 2007-dii, ayuu Axmed Walad Cabdalla xilka kala wareegay François Fall, isagoo noqday wakiilka cusub ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
Waxaa soo magacaabay Ban Ki-moon, oo ahaa xog hayihii hore ee Qaramada Midoobay.
Howlihii uu qabtay waxaa ugu badnaa wada xaajoodkii uu ka dhex sameeyay dowladdii federaalka ee Kumeel gaarka ahayd iyo hoggaamiyeyaashii ururkii maxkamadaha islaamiga ee uu fadhigooda ahaa magaalada Casmara ee caasimadda dalka Eretariya.
Walad Cabdalla wuxuu ku guuleystay inuu heshiis dhex dhigo labada dhinac ee isku hayay siyaasadda Soomaaliya.
Heshiiskaas taariikhiga ahaa ayaa la magac baxay "Heshiiskii Jabuuti".
Bishii luulyo ee sannadkii 2010-kii ayuu Walad Cabdalla, oo ahaa wakiilkii Qaramada Midoobay ee ugu wakhtiga dheeraa Soomaaliya ku dhawaaqay inuu howl gab ka noqday shaqadaas, wuxuuna dib ugu laabtay xarunta Qaramada Midoobay.
Waxaa lagu tilmaamay inuu xiriir dhow la lahaan jiray dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, isagoo markii uu xilka ka dagayna si weyn ugu mahad celiyay mas'uuliyiinta Soomaaliya.
Image caption Augustine Mahiga
Mahiga oo u dhashay dalka Tanzania waxa uu baddalay Axmed Walad Cabdalla waxa uuna xilka hayay intii u dhaxeysay sannadihii 2010-kii ilaa 2013-kii.
Marka laga soo tago inuu ahaa wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay, wuxuu sidoo kale madax ka ahaa xafiiska siyaasadda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
Ku dhawaad saddex sano uu ahaa wakiilka gaarka ah ee Ban Ki-moon u qaabilsan Soomaaliya, waxa uu la kulmayay dhaleeceyn uga imaaneysay qaar ka mid siyaasiyiinta iyo ururrada bulshada rayidka ee Soomaaliya.
3-dii bishii Juunyo ee sannadkii 2013-kii ayuu Mahiga wareejiyay xilka wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
Image caption Nicholas Kay
29-kii bishii Abriil ee sannadkii 2013-kii, xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-Moon ayaa wakiilkiisa gaarka ah ee Soomaaliya u soo magacaabay Nicholas Kay, oo u dhashay dalka Ingiriiska.
Mr Kay ayaa si rasmi ah xafiiska ugala wareegay Augustine Mahiga, taariikhdu markii ay ku beegneyd 3-dii bishii Juunyo ee isla sannadkaas 2013-ka.
Bishii Disembar, Mr Kay wuxuu soo dhaweeyay go'aankii ay baarlamaanka Soomaaliya codka kalsoonida ugala noqdeen ra'iisul wasaarihii xilligaas hayay Cabdi Faarax Shirdoon.
Intii uu xilka hayay, Mr Kay waxa uu ka shaqeeyay arrimo ay ka mid ahaayeen heshiiskii Qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya.
Dabayaaqadii sannadkii 2015-kii ayaa xilka laga wareejiyay Nicholas Kay.
Image caption Michael Keating
Laga billaabo bishii Janaayo ee sannadkii 2016-kii ilaa bishii Sitembar ee sannadkii 2018-ka, xilka wakiilka gaarka ah ee xog hayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxaa hayay Michael Keating oo u dhashay dalka Ingiriiska.
Intii uu xilka hayay waxaa la doortay madaxweynaha Soomaaliya ee hadda hoggaanka haya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Mr Keating waxa uu goob joog u ahaa khilaafkii ugu horreeyay ee soo kala dhex galay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
Waxa uu dadaal u galay sidii loo dhammeyn lahaa xasaradaha ka dhex aloosnaa hoggaamiyeyaasha labada dhinac.
Image caption Nicholas Haysom, wakiilka gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya
Nicholas Haysom oo ah garyaqaan u dhashay dalka Koonfur Afrika ayaa ah wakiilka ugu dambeeyay ee wakhti xaadirkan Qaramada Midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya.
Mr Haysom oo baddalay Mr Keating ayaa xilka wakiilka gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya haya muddo dhowr bilood ah oo kaliya.
Wasaaradda arimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa ku amartay Mr Haysom inuu si degdeg ah waddanka uga baxo, ka dib markii uu warqad ku aaddan rabshadihii ka dhacay Baydhabo u diray wasiirka amniga gudaha.